“Toora dhaabaafi tumsa ummataatiin rakkoon hinhiikamne hinjiru”
“Toora dhaabaafi tumsa ummataatiin rakkoon hinhiikamne hinjiru” Featured
Guutummaa ibsa ayyaana hundeeffama DhDUO.waggaa 28fa ilaalchisee bahe
“Toora dhaabaafi tumsa ummata keenyaatiin rakkoon nuti hinhiikne, injifannoon nuti hingalmeessifne hinjiraatu”
Hunda dura, Ummata Oromoo, Dargaggootaafi Dubartoota naannoo keenyaa, Hayyoota Oromoo, Miseensota dhaabaafi Deeggartoota kaayyoo keenyaa, michoota qabsoo keenyaafi saboota, sablammootaafi ummattoota biyya keenyaa hundaan baga guyyaa hundeeffama DhDUO, Bitootessa 17, waggaa 28fadhaan isin gahe, nu gahe jenna!!
Dhaabbanni Dimokraatawaa Ummata Oromoo dhaaba qabsoo ummataatiin bocamee ummatarraa ummataaf dhalate. Dhaaba duudhaaleen aantummaafi ummatummaa keessoosaatti hidda gadi fageeffataa dhufeedha.
Duudhaalee kanneen guddisuufi caalmaatti dagaagsuuf waltajjiiwwan qabsoo keessa darbe hundatti aarsaa boonsaa kafaleera. Ummata qindeessee qabsoofsisuufis ta’e hirmaannaafi fayyadamummaasaa mirkaneessuuf boqonnaa itti haara galfate hinqabu.
Har’a wayita ayyaana hundeeffama dhaaba keenyaa waggaa 28fa kabajanu, gama tokkoon boqonnaa qabsoo darberraa barnoota argannetti fayyadamnee egeree keenya milkeessuuf kan itti karoorfannu, gama biraatiin ammoo galmoota karoora keenyaa milkeessuuf yeroo kamiyyuu caalaa ummata keenya hirmaachifnee kan hojjennu ta’a jedhamee abdatama.
Dhaabbanni Dimokraatawaa Ummata Oromoo dhaaba uumamasaatiin aadaa ummata dhaggeeffachuufi wajjummaan hojjechuu dagaagfate, waltajjii qabsoo keessa jirru sirriitti adda baafatee qabsoo cimaa keessoosaatti geggeessuun dhaabatee of ilaalaafi of sirreessaa dhaaba dhufe.
Galmeen seenaa qabsoo dhaabbatichaa waggoota hundeeffama isaarraa hanga har’aatti barraa’es imala daandii diriiraa gubbaa gubbaarra taasifameen kan ibsamu osoo hintaane bu’aa bahiiwwan hedduu kan keessummeesseedha.
Imala qabsoo hidhannoorraa hanga qabsoo farra hiyyummaatti haalli ture hundi hanguma danqaa qabsoo keenyaafi harkifannaa injifannoo keenyaatiif sababa ta’e, battala tooftaa addaatiin hogganuun danda’ame hundatti gara carraa gaariifi injifannootti geeddaramee madda milkaa’inaas ta’uu danda’eera.
Waltajjiin har’a irratti argamnu kunis amala isaatiin haalota adda isa taasisu of keessaa qaba. Imalli qabsoo keenya walfalmii humnoota lama gidduutti taasifamuun kan ibsamuudha. Gama tokkoon humni kiraa sassaabaa haala mijataa jireenyasaatiif mijaawan qabatee itti fufiinsa olaantummaa ilaalcha isaa mirkaneeffachuuf humna qabu hunda odoo hinqusatin socho’aa akka jiru ni hubanna.
Gama biraatiin ammoo, hundeen ilaalcha misoomawaafi demokraatawaa bu’aa tooraafi kallattii hoggansa dhaaba keenyaa ta’an olaantummaa ilaalchaafi gochaa kiraa sassaabdummaa diiguudhaan haaromsa naannoofi biyya keenyaa mirkaneessuuf boqonnaa malee halkaniifi guyyaa itti qabsaawamaa jira.
Kaleessa wareegama boqonnaa qabsoon gaafatu hunda kaffaluudhaan ijaarsa naannoofi biyya keenyaa keessatti ga’ee adda durummaa gumaachaa kan ture dhaabni keenya DhDUOn, har’as mirga ummata Oromoo, sabootafi sablammoota naannoo keenya keessa jiraataniifi kan ummattoota biyyattii karaa guutuu ta’een akka kabajamuuf ejjennoofi kutannoo cimaadhaan qabsaa’aa jira.
Duudhaaleen waldanda’uufi walwajjiin jiraachuu ummattoota caalmaatti dagaagee, duudhaa bu’uura nageenyaafi ijaarsa sirna demokraasii keenyaa ta’ee akka tajaajiluuf ammas boqonnaa malee qabsaa’aa jira.
Kallacha qabsoo ummata Oromoo ta’ee gaaffii siyaasaa, dinagdeefi hawaasummaa ummatichaa deebisuuf karaa tarsiima’aa ta’een hogganaa kan tureefi har’as hogganaa kan jiru dhaabni keenya taateewwan yerootiin xaxamee kan kufuufi duudhaa dhaabbatummaasaa dabarsee kan kennu miti.
Kaleessarraa baratee har’a kan hogganuufi tarsiimoowwan egeree keenya milkeessan bocee hojiirra oolchuudhaan fagootti ilaalee kan imaluudha. Kun ammoo toora dhaaba keenyaa qabannee rakkoon nuti hinhiikneefi injifannoowwan nuti hingalmeessisne akka hinjirre kan ifatti mul’iseedha.
Dhaabbanni Dimokraatawaa Ummata Oromoo gaaffiiwwan ummata Oromoo barootaaf lafarra foqoqaa turan deebii akka argatan kutannoon kan qabsaa’e, ejjennoo cimaafi wareegama qabsichi gaafatu kamuu kaffaluuf qophaa’ummaa qaburraa kan ka’e imala haaromsaatiin dhaabbatee, yeroo gahaa fudhatee, gubbaa hanga gadiitti keessoosaa sakatta’ee of haaromsuuf qabsoo obsa fixachiisaa taasiseen sadarkaa tooricha itti fufsisuu isa dandeessisuufi gaachana qabsoo ummata Oromoo ta’ee ittifufuu danda’urra yeroo geenyetti waan ta’eef guyyaa dhalootaa dhaabbatichaa bara kanaa kan addaafi seenaa qabeessa isa taasisa.
Aadaan demokraasummaafi ummatummaa dhaaba keenyaa har’as komiiwwan karaa kamiinuu ummata biraa ka’an dhaggeeffachuu, onneerraa dhiifama gaafachuufi tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuun ummata waliin mul’ata naannoofi biyyaa keenyaa dhugoomsuuf kan hojjetu ta’a. Akkuma kaleessa hunda tokkummaa dimokraatawaa ummattoota biyya keenyaafi Itoophiyaa ijaaruuf humna guutuudhaan ni hojjeta.
Adeemsa qabsoo ummata keenyaa keessatti akka naannoottis ta’e akka biyyaatti rakkoowwan siyaas-dinagdee sirna Federaalaa keenya balaarra buusuu danda’an karaa saayinsaawaa ta’een adda baasuun furmaata hatattamaa kennuun fedhii ummataa guutuun dhimma murteessaafi hatattamaan raawwatamuu qabu ta’uun hubatamee murtoo akka dhaabaatti irra gahameen bu’aawwan qabatamoon galmaa’uu jalqabeera.
Fayyadamummaa dinagdee haqa qabeessa mirkaneessuufi hirmaannaa siyaasaa karaa bilisaafi haqa qabeessa ta’een raawwachuun fedhii ummata Bal’aa Oromoo guutuun har’as akkuma kaleessaa hojii DhDUO.n dursa kenneefii hojjetu ta’ee ittifufa.
Dhaabni keenya DhDUOn dhaaba seenaa kaleessa hojjeteen boonuufi isa dhaadhessuudhaan yeroosaa gubu osoo hintaane, har’as seenaa haaraa hojjechuuf boqonnaa malee hojjetuufi waltajjii qabsoon gaafatuun karaa walmadaaluun of qopheessaa jira.
Kaleessa ijaarsa biyyaafi naannoo keenyatiif gumaacha isrraa eegamu kamuu bahachaa tureera, ammas bahachaa jira. Har’as duudhaalee ittiin qorameefi bu’aa boonsaa irraa argate ijaarsaafi haaromsa biyyaatiif tumsan caalmaatti gabbisuurratti argama. Tooftaawwan qabsoo toora dhaabbatichaa irraa maddan gara garaa fayyadamuudhaan galmoota yeroo gabaabaafi dheeraa milkeessuuf hojjechuurratti argama.
Fayyadamummaan dinagdee ummata keenyaa guddatee, hirmaannaafi fayyadamummaan haq-qabeessi akka mirkanaa’uuf, al-seerummaan guutummaatti dhabamee lammiileen karaa sirriifi seeraa qofaan qabeenya haalli itti horatan akka mijaa’uuf hoggansa cimaa dhaaba keenyaafi hojii qindoominaa mootummaa keenyaatiin milkeessuuf yeroo kamuu caalaa ni hojjetama.
Toora dhaaba keenyaa qabannee qabsoo taasisnuun gaaffiin ummata keenyaa deebii hinqabne hinjiraatu, rakkoon kamiyyuu mudatu duudhaa ganamaa dhaabni keenya qabuufi aantummaa ummatummaa inni gabbifate irraa akka isa hinmaqsine cimsee amana.
Waan dubbate raawwachuufis waadaasaa haaromsuurratti argama. Rakkoowwan mudatan hundi deebii ga’aa akka aragataniif ammoo wal-dhaggeeffachuufi yeroo ga’aa waliif kennuun dawaa cimaa ta’uusaa ni hubata. Yeroo sana tooftaa qabsoofi tarsiimoo ittiin hoggannee keessaa baanu qopheeffachuuf yeroo gahaa arganna amantaa jedhu qaba.
Dhaqqabamummaan misoomaa, hanqinni dhiyeessii, rakkoon hoji- dhabdummaafi hanqinnni qulqullina hojiifi hojmaataa, hanqinni dandeettiifi kutannoon hoggansaa rakkoowwan itti bu’uun jaqabameedha malee rakkoo bu’urarraa hiikkate miti.
Kun garuu qabsoo dhaaba keenyaatiin guutummaatti furuuf rakkoo humna keenyaa ol ta’uu miti. Dhimma hojjennu hunda abbaa dhimmaa ajandichaa kan ta’e ummata bal’aa biraan geenyee yoo hirmaachifne akka naannootti miti biyyaafuu hojii fakkeenyummaa qabu ta’uunsaa walnama hingaafachiisu.
Kanaafuu, DhDUO.n borus sadarkaa qabsoon keenya irra ga’e irraa ka’uun qophaa’ummaa tooricha gara fuula duraa ittiin fufsisuu isa dandeessisu, ciminoota hedduufi hamilee kana ittiin dhugoomsus dhaaba qabu ta’ee qabatamaan haaromeera.
Milkaa’ina galmoota haaromsa keenyaatiif hirmaannaan qaamolee adda addaa murteessaa ta’uu kan amanu dhaabni keenya ayyaana hundeeffama dhaabbatummaasaa waggaa 28fa sababeeffachuun waamichasaa kan kabajaa ni dabarsa.
Torban kana/This_Week 11787
Torban darbe/This_Month 91624
Guyyaa mara/All_Days 1603582